ကိုပေါက် အနောက်ကလိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုပေါက် အနောက်ကလိုက်ခြင်း
Posted by မောင် ပေ on Aug 15, 2012 in Creative Writing, Think Different | 17 comments
ဘာလို့ ဒီလိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံက လမ်းပြောင်းပြန်ထွက်နေတဲ့ စစ်ကားတစ်စီးပုံကို ပြထားတာမို့ ပါ ။
“ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းတဲ့တစ်ခြားကားတွေကိုရိုက်ပြလဲ ရနေတာပဲဟာ… ဘာလို့ စစ်ကားကိုမှ ရိုက်ပြရလဲ ” လို့ မေးလာခဲ့ရင် ဒီလိုပါ
ပုံထဲပါ လမ်းကြားက မန်းတလေးမြို့ ဈေးချိုနာရီစင်အရှေ့ ဘက်က လမ်းကြားလေးထဲမှာပါ ဧရာဝတီဘဏ်ရှိတဲ့လမ်းကြားဗျ ။ ဒီလမ်းကြားထဲမှာ စက်ပစ္စည်းဆိုင်တွေ ၊ ကုန်မာဆိုင်တွေ ၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်တွေ ၊ ရေပိုက်ဆိုင်တွေ ၊ ငါးဖမ်းပိုက်ဆိုင်တွေ ၊ ဖိနပ်ဆိုင် ၊ ကြိုးဆိုင်… တော်တော်ကို စုံတဲ့လမ်းကြားလေးဗျ ။
အဲဒီလမ်းကြားက မြောက်ဘက်ကနေ တောင်ဘက်ကိုပဲ သွားရတဲ့ တစ်လမ်းမောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာ နှစ်ပေါင်း၁၀နှစ်မက ကြာခဲ့ပါပြီတဲ့ ။ လမ်းထိပ်မှာလဲ တစ်လမ်းမောင်း ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော် ရေပိုက်ဝယ်စရာရှိလို့ အဲ့လမ်းကြားထဲက ပိုက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်တုန်း ပုံထဲက စစ်ကားဟာ လမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်း မြောက်ကနေ တောင်ကို ဝင်လာပြီး ၊ ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ ဆိုင်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ရပ်ပါတယ် ။ ရာထူးကြီးကြီးပါလာတာတော့ မတွေ့ ရပဲ တပ်ကြပ်အဆင့်လောက် နှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီး … သူရို့ လုပ်စရာရှိတာ ၊ ဝယ်စရာရှိတာ ဆင်းလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ… ။ သူရို့ ကိစ္စရှိတာတွေ ပြီးစီးသွားတဲ့အခါကြ ပြန်မယ်ပေါ့ ။ အဲဒီမှာ စစ်ကားကိုမောင်းတဲ့တစ်ယောက်က ဝင်လာတဲ့ဘက်ကို ပြန်ထွက်လို့ ရလားလို့ ၊ အဲဒီနားက ဆိုင်ရှင်တစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးပါတယ် ။
ဆိုင်ရှင်က ဘာပြန်ဖြေလဲ ဆိုတော့…
“ ဒီလမ်းက တစ်လမ်းမောင်းပါ ၊ ပုံမှန်ဆိုရင် ပြန်ထွက်လို့ မရဘူး.. မီးပွိုင့်က မော်တော်ပီကယ်လှမ်းမြင်ရင် ဖမ်းလေ့ရှိတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ က စစ်ကားပဲ ၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး… မောင်းမောင်း…တဲ့ ”
ဒါနဲ့ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း စစ်ကားဟာ ပြောင်းပြန်ဘက်ကို ခေါင်းလှည့်ပြီးမောင်းထွက်တော့တာပေါ့။
အဲဒီ သူရို့ စကားအပြန်အလှန်ပြောနေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုရှိလာလို့ ၊ ကမန်းကတန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ လှမ်းရိုက်ထားလိုက်ပါတယ် ။
ဒီလိုဗျာ.. တစ်လမ်းမောင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းမျိုးကို ၊ စစ်ကားဆိုရင် ပြောင်းပြန်မောင်းလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက လူတော်တော်များများခေါင်းထဲမှာ ရှိနေကြတာရယ် ၊ စစ်ကားမောင်းတဲ့လူကလဲ ငါမောင်းနေတာ စစ်တပ်က ကားပဲဆိုပြီး ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာမှသောက်ဂရုမစိုက်ပဲ မောင်းချင်သလို မောင်းတာရယ် ကို ကျွန်တော်က နှိုင်းယှဉ်တွေးမိပြီး ဒီပို့ စ်ကို ရေးတင်ဖြစ်ပါတယ် ။
လူတွေရဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုး ၊ အသား ကျနေတဲ့ အတွေး မှားတွေ၊ အမြင် မှားတွေ၊အကြောက် တရား နဲ့ ဦး ကျိုး မှု တွေ ပြု ပြင် နိုင်ဖို့ အချိန် တခုတော့ လိုမယ် ထင်တယ်။
အူးအူးပေ ……ပြောင်းပြန်တွေ ဇောက်ထိုးတွေကထားပါ …… ဓါ့ပုံမှာ ဖြူဖြူတွေခြစ်ထားတာဘာလို့လဲ … ကင်မလာမှာ အော်တိုပါတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေလား ………
၂၄ နှစ်ဆိုတော့ခေါက်ရိုးကျိုးနေပုံရတယ်
ဒီမှာလဲ မီးနီကိုဖြတ်မောင်းလို့မီးစိမ်းကရှောင်နေရတယ်
ဥပဒေ တကယ်စိုးမိုးချင်တယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးမှာ သမတသေးပေါက်နေလဲဖမ်းရမှာ
ကျွန်တော်တို့ သမတကြီးက အလုပ်များလွန်းလို့
မရွှေကြည် နဲ့ 
ကျွန်တော့်ပိုစ့်ကို ဝင်ဖတ်သွားသူများ အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား
“““ သူ က အဲဒါမို့ လို့ဒါမျိုးလုပ်လို့ ရတယ် ””” ဆိုတဲ့ ၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကလူတွေ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ၊ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့ အစွဲကြီးကို ဘယ်လိုဖျက်ကြရမလဲဆိုတာ ၊ နောက်ပြီး ဒါမျိုးလုပ်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူး ဆိုတာကို လူတိုင်းစေ့သိအောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါစို့ 
ဟယ်.. ဖြူဖြူကြီးတွေက ဘယ်နှယ့်ဖြစ်နေတာတုန်း ။ အဲ့ဒီနားတ၀ိုက် လမ်းအမြဲရှုပ်နေတတ်တာတော့သိတယ်။ လူတွေက အကြောက်တရားကို မဖယ်နိုင်သေးသရွေ့ ဒီလို အတွေးတွေ အမြဲစိုးမိုးနေအုန်းမှာ။
ကြားဖူးတဲ့စကားတစ်ခွန်းပါ… “နင်တို့က ကြယ်ပွင့်နဲ့ကားကိုလည်း ဂိတ်ထိုးကြေး တောင်းတာပဲလား” တဲ့…
“နင်တို့က ကြယ်ပွင့်နဲ့ကားကိုလည်း ဂိတ်ထိုးကြေး တောင်းတာပဲလား” )) တောင်းသင့်ရင်တောင်းရမှာပဲ မမွန်မွန်ရေ့…။ ကျွန်တော်တို့ ဆီက ပြည်သူ့ဆေးရုံကတော့ ရဲစခန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှုတွဲလည်းမရဘူးဆြာ…။ ထုံးစံအတိုင်းပေးမှ…။ လာထားပဲ…။
ကိုပေ အဲ့ဒါလေ … အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားတွေလေ …. ။ ရှယ်တွေ …. ခေါင်းပေါ်မှာ ဇွန်းတပ်ထားတယ် …
ဟိုဖော်လံဖား ငကျွတ်တွေကလည်း တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားဆိုတာ သာမန်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာပဲ သက်ရောက်တယ်ထင်သလားမသိဘူး ….. ။
ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလျှင် နောင် အနှစ်နှစ်ဆယ်လည်း ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ …အရိုးစွဲနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမယ် မထင်ဘူး .. ။
တို့ကတော့..ကိုပေါက်နောက်လည်း.လိုက်တယ် ။
ကိုပေက လေးပေါက်အနောက်ကလိုက်တယ်ဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်နောက်က လိုက်စီး
သလို့ ပါဗျာ။ခုလို တရားမဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ စစ်ခွေးတွေက အတိတ်မေ့နေပုံရတယ်။
မဟုတ်ဘဲ စွဲနေကြတဲ့ “ငါ” စွဲတွေကြောင့် ခက်နေတာပေါ့ဗျာ …
အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား ဆိုတဲ့ စကားတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ
ခုလိုချိန်မျိုးမှာ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ပျောက်ဖို့ သင့်နေပါပြီ …
( အထင် … ခက်ဒစ်တူ စိန်ဗိုက်ဗိုက် )
လမ်းကြောင်းမသိလို့ မေးတဲ့သူက မေးတယ်ဆိုတော့ သူတို့ဘက်က တာဝန်ကျေသားပဲ။
စည်းကမ်းကို ပြောရုံနဲ့ ပြီးရမှာကို စည်းဖောက်နိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးသွားသူက မှားနေတာ။
စီဂျေသာလုပ်ချင်တာ ဒါမျိုးရိုက်ဖို့ကျတော့ ကြောက်ဒူးတုန်သားးးးးးးးးးးးးး